PSL Inoti Yave Kuda Kuti Mitambo yeNhabvu Itange
Dynamos ne Highlanders
Vanotungamira nhabvu yepamusoro vePremier Soccer League varikuda kuti mitambo ichidzoka kwafamba gore nemwedzi inoraudzira musina nhabvu munyika.
Gwaro ratenderanwa nePSL iri kuda kuti zvikwata zviungane zviri mumapoka mumaguta eBulawawo, Harare, Mutare neZvishavane, zvina zvichapedza zviri pamusoro muguta rega rega zvichipinda muma semi fainari. Izvi vanoitawo kuti vassafambe nendo refu.
VePSL varikuda kuti zvikwata zvishanu zvisangane muHarare, zvimwe zvishanu maMutare, zvikwata zvina muBulawayo, nezvimwe zvina kuZvishavane, mitambo ichizotambwa kwemavhiki mashanu.
Asi mukuru wekumahofisi ePSL VaKenny Ndebele vanoti gwaro iri harisati rave chisungo sezvo vachiri vakamirira kunzwa kune veZifa avo vanotungamira nhabvu munyika.
VePSL vanoti varikutarisira kuti kunyoreswa kwevatambi kunge kwapera musi wa 31 Kukadzi, mitambo ichizotanga muna Kubvumbi.
Vanoti mwaka uno havasi kukwanisa kutevera hurongwa hwemazuva ese nemhaka yekuoma kwaita nyaya dzemari nemhaka yechirwere cheCovid 19.
Zvikwata zvese zvichakwikwidza muPSL zvirikutarisirwa kubvisa mari inoita zviuru zviviri nemazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $2 500 yekunyoresa.
Maneja wevatambi VaGeorge Deda vanoti dai zvinhu zvaive zvakanaka, hurumende yaifanira kubatsira zvikwata nemari sezvirikuitwa kune dzimwe nyika.
Muteveri wemutambo VaAlphios Mavheka vanoti mitambo ikadzoka FC Platinum inotora zvekare mukombe sezvo yaita gadziriro nekukwikwidza muCaf Champions League.
Panguva iyo venhabvu vaine nzara yekupinda munhandare, mangwana mangwanani, Mary Anne Musonda arikutungamira chikwata cheZimbabwe checricket chemaLady Chevrons mumutambo wekutanga wezuva rimwe nePakistan.
Uyu ndiwo mutambo weZimbabwe wekutanga kubva muna Chivabvu 2019 uyezve wekutanga pakati pePakistan neZimbabwe mukiriketi yevanhukadzi.
Zimbabwe yaunganidza vatambi vayo vane mukurumbira vanoti Modester Mupachikwa, Pelajia Mujaji, Precious Marange, Tasmeer Granger, Ashley Ndiraya nevamwe vakaita saFrancisca, Chipare naKellis Ndlovu, avo varikutambira nyika kekutanga.
Mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi iyo inosanganisira yemaT20 irikupera musi wa 20 Kukadzi
Pakistan neZimbabwe dzirikushandisa mitambo iyi kugadzirira makundano eICC World Cup qualifiers 2019 ayo arikuitwa muna Chikumi naChikunguru.